မြန်မာ အပါအဝင် နိုင်ငံခြား လုပ်သားနှစ်သန်းကျော်ကို နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်း အမြန် တိုးပေးနိုင? - Yangon Media Group
မြန်မာ အပါအဝင် နိုင်ငံခြား လုပ်သားနှစ်သန်းကျော်ကို နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်း အမြန် တိုးပေးနိုင?
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃
မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံခြားလုပ်သားနှစ်သန်းကျော်ကို နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း အမြန်တိုးပေးနိုင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ခရိုင် ၇၇ ခုတွင် OSS ရုံးများဖွင့်လှစ်မည်ဟု ထိုင်းအစိုးရက ကြေညာထားကြောင်းသိရသည်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် အပြီးအစီး အထောက်အထားပြုလုပ်ပေးမည့် One Stop Service များကို ဖေဖော်ဝါရီ ၅ရက်မှ မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ဟု ကြေညာထားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ သိရသည်။
”အဲဒီရုံးတွေကို ထိုင်းကခရိုင် ၇၇ခုစလုံးမှာ ဖွင့်ပေးမှာပါ။ မတ်လ ၃၁ရက်မှာ သက်တမ်းကုန်တော့မယ့် သူတွေအတွက် သက်တမ်းတိုးဖို့ဖွင့် ပေးတာပါ။ စုစုပေါင်းဆို လူနှစ်သန်း လောက်သက်တမ်းတိုးရမှာမို့ အမြန်နည်းနဲ့ လုပ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့”ဟု ထိုင်းအခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအခွင့်အရေးကွန်ရက် (MWRN) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဌေးက ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက်ကပြောသည်။ ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် CI အုပ်၊ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာနှင့်အလုပ်လုပ် ခွင့်ပါမစ်စသည့်အထောက်အထား တွေကို တစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ် ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထား ခြင်းဖြစ်သည်။
သက်တမ်းတိုးရမည့်ထဲတွင် မြန်မာလုပ်သား အများဆုံးဖြစ်ကာ ယင်းလုပ်သားများအတွက် လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက်၊ ၉ရက်နှင့် ၁ဝ ရက်တို့တွင် ထိုင်း-မြန်မာညွှန်ချုပ် အဆင့်အစည်းအဝေးကို နေပြည် တော်၌ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အထောက်အထား မဲ့ဖြစ်နေသည့် မြန်မာလုပ်သားများကို ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မတ်လ၃ရက်မှစတင်၍ အထောက်အထားထုတ်ပေးခဲ့ ကာလက်ရှိတွင် မြန်မာလုပ်သားတစ်သန်းကျော်ကို အထောက်အထားထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကဆိုထားသည်။
ရှပ်4ချစ်သူ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို မကြာမီ ရိုက်ကူးမည်
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရား အခြေခံဈေးသည်များ သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်း
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အစိုးရအချင်းချင်းသာမက ပြည်သူနှင့်ပြည်သူ အချင်းခ?
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက တွေ့ရှိခဲ့သော ဘားအံမြို့နယ်ရှိ ‘ဣစ္ဆာသယ လိုဏ်ဂူ’ သို့ လာရောက် လည်?
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကို ငဖြီးကြီးဟု ဝေဖန်ခဲ့ပြီးနောက် မကြာမီ စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်း လမ?
ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီ နှင့် အမေရိကန်မင်းသမီး မက်ဟန်မာကဲလ် (Meghan Markle) တို့ စေ့စပ်
ဝီလ်ရှိုင်းယား၏ ခွဲစိတ်မှု အခြေအနေကို ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း အတည်ပြု